२०७७ असोज २५, आइतबार | eAdarsha.com
२०७७ असोज २५, आइतबार
आर्थिक अवस्था कमजोर बन्नेछ । स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ । विपक्षीले कमजोरीको फाइदा उठाउने छन् । काम गरेर जस नमिल्दा नैराश्यता छाउनेछ । नयाँ कार्य थाल्नु र टाढाको यात्रामा निस्कनु उचित देखिन्न ।
मिथुन ः ढिला सुस्तिका कारण महत्वपूर्ण मौका फुत्कनेछ । जिद्दि गर्नाले मान्यजनहरु रुष्ट बन्नेछन् । अनावश्यक कार्यमा भुल्दा समयको बरवादी मात्र हुनेछ । अचल वस्तुमा गरेका लगानिबाट भने दीर्घकालीन लाभ लिन सकिनेछ ।
विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । शैक्षिक गतिविधिमा उन्नति हुनेछ । देशदेशान्तरसम्म प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । बोलिको कदर हुनेछ । अघिदेखिका समस्यालाई हल गर्न सकिनेछ ।
व्यवसायबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ । रोकिएका वित्तीय कारोवार सुचारु हुनेछन् । नयाँ संझौताले पछिसम्म लाभ मिल्नेछ । सानो लगानिले नै धेरै लाभ मिल्दा काम गर्ने हौसला थपिनेछ । आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्नेछन् ।
नयाँ ठाउँको भ्रमणको योग बनेको छ । इमान्दारीताको कदर हुनेछ भने विशेष कार्यको जिम्मेवारी समेत मिल्नेछ । सृजनात्मक कार्यमा मन जानेछ । कर्म क्षेत्रमा परिवर्तन आउनेछ । ऐतिहासिक कार्यको आरम्भ गरिनेछ ।
कार्य गर्दा नहतारिनु होला, दिन मिश्रीत फलदायी रहेको छ । सकारात्मक सोच विचार रहेता पनि विवादमा परिन सक्छ, बोलिमा ख्याल पुर्‍याउनु होला । आर्थिक पक्षमा सुधार हुँदा, व्यवहार मिलाउन सकिनेछ ।
कामको सिलसिलामा रमाइलो यात्राको अवसर समेत मिल्नेछ । नोकरीमा प्रशंसा एवं नयाँ अवसर मिल्नेछ । अरु दिन विरोध गर्नेहरु पनि समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन् । प्रेमीप्रेमी बिचको सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ ।
आज विशेष गरेर विद्यार्थी वर्गका लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आंशिक सुधार भएता पनि दुःख अनुरुपको लाभ भने मिल्ने छैन । मन वेचैन रहनेछ । नोकरीमा अपजस व्यहोर्नु पर्नेछ ।
वि.सं. २०७७ साल असोज २५ गते आइतबार, तदनुसार ई.सं. २०२० अक्टोबर ११ तारिख, प्रमादीनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरदऋतु, चान्द्रमान अनुसार अधिक आश्विनकृष्णपक्षको नवमी तिथि दिवा १२ः१६ बजेसम्म, त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ ।
नक्षत्र तिष्य वेलुका ९ः१४ बजेसम्म, त्यसपछि अश्लेषा रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग सिद्ध वेलुका ८ः०३ बजेसम्म, त्यसपछि साध्य रहनेछ ।
करण वणिक् रात्रि ११ः५३ बजेसम्म, त्यसपछि बव रहनेछ ।
श्रीसूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा : कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ ।
सूर्योदय ६ः०२ बजे, सूर्यास्त : बेलुका ५ः३७ बजे ।